အစိမ်းရောင်စခန်းကုန်ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
GREEN စခန်း CO PORDUCTS ။ , LTD မှ Changzhou မြို့, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်အတွက် 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘယ်ဟာစောင်, Self-ငွေဖျာ, ပရိဘောဂနှင့်အချို့သောစခန်းချနေထိုင်မည့်ပစ္စည်းများတပ် ချ. တပ် ချ. , အိတ်, ပျော်ပွဲစားစောင်အိပ်ပျော်နေသော, တဲ၌အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက် 130 လုပ်သားများန်းကျင်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အရည်အချင်းပြည့်မီ & ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထုတ်ကုန်များကိုကိုယျ့ကိုယျကိုအပျနှံ။ အဖွဲ့အစည်းကိုဇယားနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤရည်မှန်းချက်အားဖြင့် powered နေကြသည်။ အားလုံးထုတ်ကုန်တင်ပို့မတိုင်မီတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။ ငါတို့ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာ AZO, သယံဇာတ, PAHs, ခဲအကြောင်းအရာ, လက်လှမ်းမီမှု, Phthalate, Formaldehyde, EN13537, EN71, CPAI-84, CPAI-75, ISO5912 အပါအဝင်ဥရောပစျေးကွက်နှင့်မြောက်အမေရိကဈေးကွက်များကမေတ္တာရပ်ခံသည့်ဆွေမျိုးစမ်းသပ်မှု, လွန်ပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မာနထောင်လွှားကြသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများအပြားအသစ်သောပစ္စည်းများကိုပေးနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များစစ်မှန်တဲ့လာရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများကြီးကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသော။
သင်ကရန်အရေးကြီးပါသည်ထင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်များနှင့်သစ်စာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတိုင်, ကျွန်တော်တို့ကိုယူရီကာ, Nordisk, အနီရောင်ရှိ fox, Obelink, အီး Leclerc, Rusta, Aldi UNHCR, ခြင်္သေ့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှတပ်မတော်ဦးစီးဌာန ... အပါအဝင်အများအပြားဖောက်သည်ရရှိခဲ့ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျတှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး!